Fiber Optic Splitter Bhokisi Optical Splitter Bhokisi 1X8 LGX Kaseti Ine SC PC Zvinobatanidza - Iyo Cableonline.com
Single Mode Fiber Optic Cable, Armored Fiber Cable ...
Outdoor Multimode Fiber Optic Cable Black Pe bhachi ...
FBT Fiber Optic Cable mahwanda With Single Window, ...
G657A2 Fiber Optic mahwanda For Fiber Optical Switch ...
LGX PLC Fiber Optic mahwanda Bhokisi pamwe SC APC Simplex ...
Fiber Optic Splitter Bhokisi Optical Splitter Bhokisi 1X8 LGX Kaseti Ine SC PC Zvinobatanidza
Yakadzama Chigadzirwa Tsananguro Chigadzirwa Zita: LGX PLC Splitter 1X8 Ruvara: Grey Kushanda Tembiricha: -40C Ku 85C Chinyorwa: LGX Fibre Type: G657A1 Package Type: LGX Plastikhi Fibre Optic Splitter Bhokisi Optical Splitter Bhokisi 1X8 LGX Cassette Ine SC PC Connectors PLC Splitters inoshandiswa kugovera zviratidzo zvemaziso kunzvimbo dzakasiyana dzekugadzirisa. Mune optical network, zvinowanzo fanika kupatsanura chiratidzo che optical mumasaini mazhinji akafanana, kana kusanganisa akawanda maseru mu singl ...
LGX PLC mahwanda 1X8
-40C Kusvika 85C
PLC Splitters inoshandiswa kuendesa masaini emaziso kunzvimbo dzakasiyana dzekugadzirisa. Mune optical network, zvinowanzo fanika kupatsanura chiratidzo che optical mumasaini mazhinji akafanana, kana kusanganisa akawanda masaini kuita chiratidzo chimwe. PLC Splitter rudzi rweiyo Optical simba manejimendi chishandiso icho chakagadzirwa uchishandisa silica optical waveguide tekinoroji.
Isu tinopa yakazara akateedzana e1 * N uye 2 * N mahwendefa zvigadzirwa zvakagadzirirwa kune chaiwo maficha. Zvese zvigadzirwa zvinosangana GR-1209-CORE-2001 uye GR-1221-CORE-1999 zvinodiwa.
Izvi chipasa mhando PLC mahwanda cantain maviri 1 * 8 PLC mahwanda mukati, Zvinobatsira chaizvo kuti FTTH gungano mhinduro. Iyo inehihigh performance performance, senge yakadzika yekuisa kurasikirwa, yakaderera PDL, yakakwira kudzoka kurasikirwa uye yakanakisa kufanana pamusoro pehupamhi wavelength renji kubva 1260 nm kusvika 1620 nm, uye shanda mune tembiricha kubva -40ºC kusvika + 85ºC.
Optical Signal Kugovera
Lan uye CATV System
Kuyera Sisitimu uye Laser System
DWDM uye CWDM Maitiro
Yakadzika Kuisa kurasikirwa
Yakanaka chiteshi-kune-chiteshi kufanana
Wide Anoshanda Wavelength: Kubva 1260nm kusvika 1650nm
Wide Uchishandisa Tembiricha: Kubva -40 kusvika 85 ℃
Kuvimbika Kwakakwirira uye Kugadzikana
1 × N PLC mahwanda
Paramu Yuniti Kukosha
Chigadzirwa Chigadzirwa 1 × 2 1 × 3 1 × 4 1 × 6 1 × 8 1 × 12 1 × 16 1 × 24 1 × 32 1 × 64 1 × 128
Kushanda Wavelength nm 1260 kusvika 1650
Kuisa Kurasikirwa Typ. dB 4 6 7 9.4 10 12 13.2 16 16.5 20.5 24.5
Kufanana (Max.) dB 0.5 0.6 0.8 0.8 1 1 1.4 1.5 1.6 2 2.6
PDL (Max.) dB 0,2 0,2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.8
TDL (Max.) dB 0.5
Dzorera Kurasikirwa dB /55 / ​​50
Kutungamira dB ≥50
2 × N PLC mahwanda
Chigadzirwa Chigadzirwa 2 × 2 2 × 4 2 × 8 2 × 16 2 × 32 2 × 64 2 × 128
Kuisa Kurasikirwa Typ. dB 4.3 7.3 10.5 14 17.2 20.8 24.8
Kufanana (Max.) dB 0.8 1 1.2 1.5 1.8 2 3
PDL (Max.) dB 0,2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 1
Q1, Ndeipi yako nguva yekuendesa?
A: Kazhinji, zvinotora mazuva 3-7 mushure mekubhadharwa.
Iyo chaiyo yekuendesa nguva inoenderana nezvinhu uye neodha huwandu.
Q2, Unogona kubereka maererano ivhu kana kudhirowa?
A: Ehe, isu tinogona kuburitsa neyako sampuli kana technical technical vanodhirowa. Nesuwo tinogona kugadzira uye kuvhura chakuvhuvhu iwe.
Q3, Ndeipi yako yemuenzaniso mutemo?
A, Tinogona kupa yemahara sampuro yekupa mhinduro fiber fiber zvigadzirwa, asi vatengi vanofanirwa kubhadhara mutengo wekutakura.
Q4, Unoedza zvinhu zvako zvese usati waendesa?
A, Ehe, zvese zvinhu zviri 100% zvakaedzwa pamberi pekupedzisira kurongedza uye kuendesa.
Mishumo yekuyedza inogona kupihwa kana zvichidikanwa.
Q5, Unovimbisa sei bhizinesi renguva refu uye chengetedza kudyidzana kwakanaka?
A, Kutanga, tinoramba tichiramba tichivandudza kuti tiite zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye nekupa sevhisi iri nani tichichengetedza mitengo inokwikwidza kuve nechokwadi chekuti vatengi vanobatsirwa.
Kunze kwezvo, isu tinoremekedza mutengi wese seshamwari dzedu uye tinokoshesa yega yega diki kana hombe kurongeka.
Kugamuchirwa kuti utaure nesu kune chero zvikumbiro -Wako akavimbika mudiwa pane fiber optics / OPTICO!
internet optic waya mahwanda,
Manyiminya waya mahwanda
Yepfuura: Yakabatana LGX Type 1 × 16 PLC Splitter, Kunze GPON Sisitimu Fiber Optic Cable Splitter
Zvadaro: Yakagadziriswa PLC Fiber Optic Splitter Module 1X64 Yakazara Inoshanda Wavelength 1260-1650nm
Yakatsanangurwa Chigadzirwa TsanangudzoZita reMuchina: LGX PLC Splitter 1X8Color: GreyWorking Tembiricha: -40C To 85CMaterial: LGXFiber Type: G657A1Package Type: LGX PlasticFiber Optic Splitter Bhokisi Optical Splitter Bhokisi
FTTH Fiber Optic mahwanda 0.9mm 1 * 8 Steel Tube ...
1X4 0.9mm PLC mahwanda neLC APC yekubatanidza
CATV 0.9mm 1 × 32 PLC Optical Lead mahwanda ...
1X8 0.9mm PLC mahwanda 1m ine SC APC yekubatanidza
ABS 1X32 PLC mahwanda SC UPC 1M FTTH mhinduro
1 * 16 ABS Nhema Bhokisi Fiber Optic Splitter ine 3 ....
Matambudziko uye Kugadziriswa kweDrop Fibre Opti ...